Barrier Gate &amp; Turnstile System
ယာဉ်ရပ်နားစခန်းတွင် အဝင် နှင့် အထွက်တွင် အသုံးများသော ဂိတ်အတားအဆီးမောင်းတံ အမျိူးအစားဖြစ်သည်။ Auto Control စနစ်ဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားနိုင်သည်။ အဝင် နှင် အထွက် အပေါက်များတွင် ထားရှိနိုင်သည်။ Microprocessor ကို အခြေခံကာ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများအတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားသော ဂိတ်အမျိူးအစားဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဂိတ်မောင်းတံကို ကဒ်နှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားသည်။ Controller က ဂိတ်ထဲမှ ကွန်ပျူတာဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ Backlit 2*20-character LCD display and 16-key keypad Reader support: Magnetic, Bar code, EM/HID Proximity, Mifare Up to 3200 card users and 1000 offline transactions 24 timers and 10 time zones Supports Anti-Passback Communication Interface: Multi-drop
Maximize productivity and increase ID card issuance efficiency with the industry-leading features of the Datacard® CD800™ card printer. Faster printing, more reliable performance and the highest resolution available make the CD800 card printeragreat fit foravariety of applications, including state and local governments, corporate or educational applications. Streamline card issuance with productivity-focused print technology Reproduce intricate text and images with high-resolution printing Protect your investment with printer modularity and upgrades like inline lamination
FEATURE •	Size 1/2&quot; BSPT or NPT •	Open orifice design used in deluge water spray system •	Non-automatic fixed pattern, external deflector •	Solid cone discharge •	K-factor(Metric) - 18, 22, 30, 35, 41, 51, 64, 79, 91 &amp; 102 •	K-factor(US) - 1.26, 1.54, 2.10, 2.45, 2.87, 3.57, 4.48, 5.53, 6.37 &amp; 7.14 •	Spray angle - 65°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120° &amp; 140° •	Each Nozzle body permanently marked with model number, batch number, spray angle, K-factor &amp; UL mark •	Approvals - UL Listed and FM Approved, FM Approved Blow-Off Plug
66KV series product line has foundafar-flung avail not only in agricultural grid modification within urban and rural areas, but also in industrial or mineral enterprises. Till now, the corporation has formed its series and commercially scaled production and the product line runs well and thereby is highly appraised by our popular users. The transformer body is reliably positioned for ensuring that no dislocation occurs with the transformer and no deformation occurs with the windings during long-distance transportation or during long-term operation. Without the need of core suspension and being maintenance free, this product line may be used just via direct grid connection.
လူကြီးမင်းတို့ ၏နေအိမ် ရုံးခန်း ဆိုင်ခန်း အလုပ်ရုံများအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်တာ အ၀၀တို့ ၌ လျှပ်စစ်ဓတ်အားပြဿနာကြောင့် နှောင့်နှေး ကြန့် ကြာမှုမရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ Olympic Generator Co.;Ltd မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။လူကြီးမင်းတို့ ၏ နေအိမ် ရုံးခန်း ဆိုင်ခန်း များအတွက် အထူးသင့်လျော်ကောင်းမွန်သော ကျွန်ုပ်တို့ Olympic Generator Co.;Ltd မှတင်သွင်းဖြန့် ဖြူးလျှက်ရှိသည့် 20KVA(Three Phase) Generator နှင့်မိတ်ဆက်ပေးလိုပါသည်။CHINA နိုင်ငံ SHANGHAI စက်မှူဇုံမှ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းမီ အရည်အသွေးကောင်းမွန်စွာ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ထားသော Olympic အမှတ်တံဆိပ် 20KVA(Three Phase) Generator တွင် - FAW Engine ကိုအသုံးပြုထားပြီး Auto Voltage Regulator ပါဝင်သော Stamford Design Alternator ကိုတွဲဖက် အသုံးပြုထားပါသည်။ - 16 နာရီဆက်တိုက်မောင်းနှင်နိုင်သော fuel tank ပါရှိပြီး ၁ ဂါလံလျှင် ၂ နာရီနှူန်းမောင်းနှင်နိူင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဆီစားနှုန်း အထူးသက်သာပါသည်။ - Water Cool system နှင့် Sound Proof (Silent) system ဖြစ်သောကြောင့် အချိန်ကြာ့မြင့်စွာ မောင်းနှင်နိုင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် မလိုလားအပ်သော ဆူညံသံများ မဖြစ်ပေါ်ပဲ စိတ်အနှောင့်အယှက်ကင်းစွာ အသုံးပြူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ - Digital Control system ကိုအသုံးပြုထားသည့်အတွက်ကြောင့် မိမိတို့၏မီးစက်များကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ - DCS(Digital Control System)တွင် Generator ၏ Output Power,Output Voltage,Battery Voltage,Output Frequency,Output Ampere,Running Hour,Engine Temperature,Generator Temperature စသည်တို့ ကို အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်ပေသည်။ - Digital Control System တွင် Auto Protection System ပါဝင်သည့် အတွက် Generator ၌ Engine oil နည်းခြင်း/ မကောင်းခြင်း Over voltage/Under voltage ဖြစ်ခြင်း Over Frequency/Under frequency ဖြစ်ခြင်း High Engine Temperature ဖြစ်ခြင်း/မဖြစ်ခြင်း Overload ဖြစ်ခြင်း များဖြစ်ပေါ်ပါက ဖြစ်ပေါ်နေသော Error များကို Digital Display တွင်ပြသပေးပြီး အလိုအလျောက် စက်ရပ်ပေးသောစနစ်ကြောင့်Generator ၌ ကြီးမားသော ဆုံးရှုံးမှုတစ်စုံတရာ ဖြစ်ပွားနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
Till Touch Electronic Cash Register နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်ကောင်းမွန်မူကြောင့် စားသောက်ဆိုင်၊ အရောင်းဆိုင်များအတွက် ငွေပေးချေရာတွင် အချိန်ကုန်ဆုံးမူကို လျော့ကျစေနိုင်ပါသည်။ hardware and sofrwar နှစ်မျိုးစလုံးအသုံးပြုထားပါသည်။ အရောင်းစာရင်းဒေတာတွေကို Touch ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောကြောင့် အလွယ်တကူတွက်ချက်နိုင်ပါပြီး ငွေပေးချေမူမှာ လျင်မြန်စေပါသည်။ PC ကွန်ပျူတာ ပြေစာပရင်တာ တစ်ခါတည်းပါရှိမူကြောင့် လူကြီးမင်းတို့အရောင်းဆိုင်များအတွက် သင့်လျော်သော စက်အမျိုးစားကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးအကောင်းဆုံးကိုမှအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားသော FG Wilson မီးစက်များနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ✅ Tiger Supply Company မှတင်သွင်းနေသော FG Wilson မီးစက်များမှာအရည်အသွေးအထူးကောင်းမွန်သော Perkins engine သုံးထားပြီးဒီဇယ်သုံးဖြစ်လို့စွမ်းအင်ခြွေတာပေးပါတယ်။ ✅အိမ်သုံးကနေစက်ရုံသုံးအထိရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ 20kVA မှ 2500kVA အထိရှိပြီး open type နှင့် silent type ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ✅ဝယ်ယူသူများအဆင်ပြေအောင်ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာများဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေးလျက်ရှိပြီးဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုလည်းလွယ်ကူစွာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။For more information Please contact our Tiger Supply Company sales and marketing team hot line number ☎️09798601736,09798601737, 09 785130173, 098622431, 018603505-9 , 01-400411 For further information , detail technical specification and pricing .. Thank you so much for all of your support and interest
ကျွန်ုပ်တို့ Triple Circle Industry မှ ထုတ်လုပ်သော လုပ်ငန်းသုံး Auerial cables ကို အရည်အသွေးပြည့်မီစွာ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းကြောင့် စိတ်ချ လက်ချ နှင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပြည်တွင်းဈေးကွက်၊ အရည်အသွေး လိုအပ်ချက်များကို ဆန်းစစ်ပြီး ကြေးနီနှင့် သတ္ထုကို အသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို ပိုမိုလွယ်ကူစေပါသည်။ Conductor များကို လည်း secondly copper conductor, Soft copper conductor နှင့် aluminium conductor တို့ဖြင့် အထပ်ထပ်ပြုလုပ်ထားခြင်း၊XLPE System ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်စီးခြင်းကာကွယ်ထားခြင်းတို့ကြောင့် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးနိုင်ပါသည်။ ACSR conductor နှင့် International IEC standard နှင့် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် Customer များ၏ ထောက်ခံအားပေး ယုံကြည်မှုကိုပါ ရရှိထားပါသည်။ ဝယ်ယူလိုသော လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အီးမေလ်း (သို့မဟုတ်) chat box တို့မှ စုံစမ်းမေးမြန်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါမီးစက်များသည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ အတွက်သုံးစွဲဖို့အလွန်သင့်တော် ပြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရာတွင်လဲလွယ်ကူပြီး ရာသီဥတုဆိုးရွားသောအခြေအနေများကို ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးပါသည်လူနေအိမ်များတွက်အသုံးပြုသည့်အခါဆူညံမူကိုလျှေ့ချပေး ပါသည်။